Tambajotra sosialy Mampiaraka
Ny gadona ny fiainana maoderina dia avo fa tena fotsiny ny olona tsy dia ampy ny fotoana malalaka tanteraka, mba hihaona ny fototra ara-tsosialy mila — ny andrim-panjakana vaovao ny olom-pantatra sy mora ny fifandraisana amin ny hatsaram-panahy.
Ao ireo sy ny maro hafa ny toe-javatra izany dia afaka mamaha ny olana amin’ny toerana maimaim-poana atao hoe Mampiaraka toerana.
Toerana toy izany ao amin’ny Internet, lehibe maro.
Mampiaraka toerana iraisana ny foto-kevitra, ary mifantoka, manana tanjona voalohany dia ny hihaona sy ny firaisana ny olona amin’ny tombontsoa iombonana amin’ny manokana-tsaha
Ireo tombontsoa azo tena samihafa — avy amin’ny fikarohana siantifika ao ny nokleary fizika talohan’ny fahariana ny fianakaviana na ny mahazatra»hiresaka momba ny biby Fiompy».
Na dia eo aza ny fahasamihafan’ny foto-kevitra, ny miasa fitsipika rehetra Mampiaraka toerana izany. Mba handray anjara ao amin’ny vohikala, fotsiny ny misoratra anarana amin’ny alalan’ny mameno ny endrika izay, toy ny fitsipika, dia manome vaovao mikasika ny tenanao, ny tombontsoa, ny mampakatra sary vitsivitsy, manome antsipirihany ary ny sasany hafa vaovao.
Aorian’ny fisoratana anarana, ianao dia afaka mandray andraikitra amin’ny fomba maro miandry fotsiny, indraindray dia mandeha ny site, rehefa misy olona iray avy amin’ny hafa mpampiasa, dia mamaky ny resume maniry ny hihaona; na hianatra ny famintinana ny hafa voasoratra anarana ireo mpandray anjara, tena mivoaka amin’ny soso-kevitra momba ny fivoriana na inona na inona ny olona.
Ho hitanao ao amin’ny Internet amin’ny alalan’ny Fiarahana toerana, azonao ampiasaina om, Google na hafa fikarohana.
Izany dia ampy mba hanao fikarohana ho an’ny teny»mihaona»na ny andian-teny hoe»Mampiaraka toerana»
Inona no fikarohana sy ny fomba fampiasana azy io eto
← Ny Fahalalana - Ny Frantsay Prem Rabat